Guddigii Doorashooyinka Dadban oo la kala direy - Jowhar somali news leader
Home NEWS Guddigii Doorashooyinka Dadban oo la kala direy
Guddigii muranka ka taagnaa ee arrimaha doorashooyinka ayaa la kala direy kadib markii dhowaan golaha shacabka uu u codeeyay in doorasho qof iyo cod ah dalka laga qabto.
Guddigaan oo ay markii hore magacaawday Xukuumadda Federaalka ayaa waxaa muddo 6 bilood ka taagnaa khilaaf xoogan, kuwaasi oo aan wax shaqo qaban tan iyo markii la dhisay, iyadoona ugu dambeyn xalay la kala diray.
Guddiga ayaa waxaa la dejiyay hoteelo ku yaalla Muqdisho oo maalmo lagu siinayay Seminaaro ku aadan doorashooyinka, isla markaana soo saaray War-saxaafadeedyo kala duwan oo ay uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo baaqyo ku socda Madaxda dowladda Ferderaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda xilgaarsiinta Mahdi Guuleed ayaa guddiyadii Doorashooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo Guddiga Khilaafaadka uga mahadceliyay dedaalkii dheeraa ee ay muujiyeen muddadii 6-da bilood.
Si kastaba Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa sheegay in Guddigaan ka kala diray ay ku jiraan Saraakiil ka tirsan NISA iyo Shaqaale dowladeed, isla markaana aysan qaban karin doorasho loona baahan yahay in la kala diro.
Previous articleThe EU agrees to be carbon neutral by 2050 ahead of the US-led climate summit
Next articleSouth Korea’s “comfort women” are losing claims against Japan